I-OnePlus kunye neMeizu zizingelwa ngokukhohlisa iziphumo zeBenchmark | IPhone iindaba
Umlinganiselo wamandla, amandla angenamsebenzi abanye abasebenzisi ekufuneka becacisile ukuthengwa kwesixhobo ngokusekwe kumandla amakhulu anokubonelela ngawo. Nangona kunjalo, ezi benchmark zibonisiwe kumaxesha amaninzi azonelanga ukuseta umda kubuchule bezixhobo. Ngokukodwa xa le panorama iqhubeka ingcoliswa, iinkampani zithanda njalo Isamsung kunye ne-LG babesele bezingelwa ngexesha labo ngeendlela ezifanayo, abokugqibela ukujoyina le holo yodumo oluthandabuzekayo ngu-Oneplus noMeizu, kuba ewe, basekhona abo banika ixabiso kwezi ziphumo.
Into enomdla ngayo yonke le nto kukuba abakwazanga ukubeka esihlalweni inkokeli. Masizibeke kwimeko, ezi ngokungqinelana nezona zixhobo zinamandla kwintengiso:
I-Xiaomi 5s Plus
I-Samsung Galaxy Note 7
Okumangalisayo kukuba, iMeizu ayikho kolu luhlu, nangona kunjalo, iphelelwe lixesha, ngakumbi iinyanga ezimbalwa. Nangona kunjalo, beza ngaphambili I-OnePlus yemodeli ye-3 kunye ne-3T (ekhoyo kuluhlu) kunye neMeizu yemodeli yePro 6.
Ngamafutshane, ibiphinde kwakhona yaba yiforamu ye- XDA-Abavelisi abathathe inyathelo lokuveza ubuxoki bonke obenziwa ziinkampani ngenjongo yokucacisa ixabiso lezixhobo zazo. Ngale ndlela, amakhwenkwe XDA Baye baqaphela ukuba iiprosesa ze-OnePlus 3 kunye neMeizu Pro 6 zihlala zifaka iziphumo zolu hlobo lohlalutyo ekuhlaleni, kwimeko ye-OnePlus umzekelo, Ukubonisa amandla i-0,98GHz ephezulu kunaleyo isebenza ngokwesiqheloNgokusengqiqweni, kuba ibhetri iya kubhabha nangayiphi na imeko, inokuchaphazela uzinzo lwesixhobo ngenxa yobushushu.
Ngamafutshane, asinakumangaliswa kakhulu, ngakumbi xa iMeizu Pro 6 ingaphantsi kwesigqibo se-iPhone, kunye nekhamera embindini womva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-OnePlus kunye neMeizu zizingelwa ngokukhohlisa iziphumo zeBenmarkmark